Malagasy - Ai-marketing
Ny tolotra famerenam-bola tsara indrindra dia ny Internet sy ny fivarotana tsy miankina ivelan’ny trano.
Ampidiro ny fizaranao varotra ary mahazoa ny volanao!
LOGIN | FISORATANA ANARANA
Ahoana ny fomba fiasa?
Sokafy ny katalaogam-bola ary mitadiava fifanarahana lehibe.
Miantsena miaraka amin’ny tombony
Fenoy ny fividianana ary hiseho ny famerenam-bola ao amin’ny mombamomba anao.
Ankafizo ireo tombony azo
Ny tamberim-bola voamarina dia homena ny lanjan’ny kaontinao ao anatin’ny 2-4 herinandro.
Salama, Quang Han Nguyen no anarako!
Fanohanana consultant AI Marketing avy amin’ny AZ Hotline: 0937135907 Tombony hatramin’ny 35% / volana ary antoky ny vola fiarovana “MarketBot Protect”. AI . Ny fivarotana dia miha mahazo ny fahatokisan’ny mpampiasa vola amin’ny tontolon’ny fampiasam-bola satria, tsy ny tombony be ihany, fa koa ny laza ambony, ary koa ny fihoaram-pefy (fametrahana, famoahana vola) Avy eo AI What is Marketing? Ahoana ny fomba fiasa sy ny tombony azo? Ahoana ny fampiasam-bola amin’ny Marketing AI? Androany, hodinihiko ny tetik’asa Rosiana AI Marketing hahitanao azy
Inona ny MarketBot?
“Eny, ny haitao AI izay mamakafaka ny fihetsiky ny mpanjifa dia mamela mialoha ny fangatahana amin’ny ho avy.“
MarketBot dia mifidy vokatra azo atao mba hamakafaka ny fironana amin’ny haino aman-jery sosialy sy ny fangatahana fikarohana. Avy eo ny ekipan’ny manam-pahaizana dia mamorona sy manao fampielezan-kevitra amin’ny fanaovana doka.
Vokatr’izany dia mahazo hatramin’ny 35% isam-bolana ianao!
Fa maninona ianao no matoky AI?
AI (Artigence Intelligence) dia niatrika asa maro tsara kokoa noho ny olombelona
Torohevitra sy fanampiana
Fiofanana sy fanaraha-maso
Fakafakao sy ampitahao ny angona
Fantany izao ny fomba hahazoana fidiram-bola ara-dalàna ho anao
Miasa 24/7 na inona na inona fialantsasatra sy faran’ny herinandro
Fividianana vola farany ambony, tombony farany ambony
Mila mamatsy vola ny teti-bolan’ny dokam-barotra fotsiny ianao!
Ahoana ny fiasan’ny MakerBot?
Ny vola kely indrindra dia 10 USD
Ny MakerBot dia mamakafaka ny tsena ary mifantina ireo vokatra sy serivisy fironana.
Ekipa matihanina no hisafidy tolotra manintona indrindra amin’ny famerenam-bola ambony indrindra
Hanangana fanentanana dokambarotra manokana isam-paritra ireo manam-pahaizana
48 ora hiserana ary hanomboka hahazo
Azonao antoka fa hahazo 55% ny volanao amin’ny varotra rehetra!
Torolàlana momba ny fisoratana anarana hamoronana kaonty Ai Marketing
Dingana 1: Voalohany, tsidiho ny pejy ai.marketing na tsindrio ity rohy manaraka ity hahazoana $ 50 hiaina ilay tetikasa: https://ai.marketing/en/campaign/z4knxzbj0e
Avy eo tsindrio ny sary eo amin’ny ati-doha aseho eo ankavanana.
Fanamarihana: raha tsy misafidy ny hisoratra anarana amin’ity sary ao amin’ny ati-doha ity ianao, dia tsy hahazo komisiona ianao na ny mpamandrika rehefa mampandroso ny rafitra
Dingana 2: kitiho ny fisoratana anarana izao! araka ny aseho etsy ambany
Rehefa vita ireo dingana 3 etsy ambony, dia vita ny fisoratana anarana, azafady mba tsarovy ny mandeha amin’ny mailaka anao hanamarina ny kaontinao
Torolàlana momba ny fametrahana vola amin’ny karatra VISA
Ao amin’ny ai.marketing, be dia be ny seranana fanalana / famerenana toy ny: Visa / Mastercard / Maestro, Mir Card, ApplePay, GooglePay, QIWI, Yandex.Money, Alfa Click, Bitcoin, Ethereum. Saingy amin’ity lahatsoratra ity dia hitari-dàlana anao amin’ny alàlan’ny karatra famatsiam-bola tsotra indrindra amin’ny alàlan’ny karatra Visa aho
Fanamarihana ho an’ireo mpampiasa vola vaovao
AI Marketing TSY MANANA APP , tsy tokony manandrana fampiharana toa ny AI Marketing mba hialana amin’ny halatra ny mombamomba ny kaontinao.
Mila mamela ny fiarovana 2FA ianao hiarovana ny Kaontinao alohan’ny hametrahana ny fampiasam-bolanao.
Ka efa vitako ny nampahafantatra anao ny topy maso momba ny tetikasan’ny marketing AI – tetikasa mafana be iray tamin’ny fiandohan’ity taona 2021 ity, ny fomba famoronana kaonty sy fampiasam-bola amin’ny marketing AI.
Dingana 3:Ampidiro ny fampahalalana momba ny fisoratana anarana
Anarana: ny anaranao (manoratra tsy misy accents)
Anaram-bosotra: Anaram-bosotra sy anarana afovoany (manorata tsy misy accents)
Mailaka: ampidiro ny mailakao
Teny miafina: Ampidiro ny teny miafina (tarehintsoratra 6 – 20 ao anatin’izany ny litera, litera lehibe 1 farafahakeliny, tarehimarika, tarehintsoratra manokana toy ny! @ # $%^& * ()
Hamafiso ny teny miafinao: Ampidiro indray ny teny miafina
Avy eo dia asio ilay boaty amin’ilay teny hoe tsy robot eo akaikiny aho ary kitiho ny fisoratana anarana aseho etsy ambany
Avy eo tsindrio ny sary eo amin’ny atidoha araka ny aseho etsy ambany.
Ary ahoana ny amin’ny ambin’ny vola?
Ny ampahan’ny 45% ambiny dia ampiasaina hamatsiana ny “FundBot Defense Fund”
Tsy misy ho very ianao na dia mandà ny hividy aza ny mpanjifa ary nofoanana ny famerenam-bola! MarketBot dia hanisy famerenam-bola voafafa!
Mangarahara izany. Hita ao amin’ny kaontinao ny statistika mifangaroharo API.
Tsy mila fanandramana hitsarana. Safidio atolotra, alefaso ny fanentanana amin’ny doka, ny statistika – MarketBot no manao izany ho anao!
Tsy misy atahorana fanampiny. MarketBot Protect dia manome antoka anao onitra amin’ny varotra nofoanana. Tsy ho very dimy ianao!
Avy aiza ny vola?
Ny mpivarotra dia mandoa kaomisiona amin’ny serivisy fanonerana.
Mahasarika ny mpanjifa mety mampiasa doka marobe ny MarketBot.
Serivisy cashback vonona hizara tombony amin’ny mpanentana ny varotra.
Mamorona ny teti-bolan’ny dokam-barotra ianao ary manan-jo handray ny anjaranao amin’ny komisiona.
Mpivarotra 100 USD
Serivisy famerenam-bola 11 USD
Tahiry fiarovana 2 USD
5,5 USD ianao
Mandany 2.5 USD
Mahazo 1.25 hatramin’ny 1.35 USD ianao isaky ny dolara apetranao amin’ny doka!
Antony 5 hiaraha-miasa amin’ny MarketBot
Maody modely mazava sy tsotra
Fialana tsy misy fetra amin’ireo karatra banky ao anatin’ny 24 ora
Antoka miantoka ny risika amin’ny “MarketBot Protect”
Mpiara-miasa maherin’ny 50 – mpamatsy vola lehibe manolotra famerenam-bola ambony indrindra amin’ny varotra
Ny karamanao dia lehibe kokoa amin’ny programa Affiliate
Ny namanao dia mampihetsika tapakila
Manasà namana iray any amin’ny MarketBot ary andefaso Voucher fanomezana 50 USD izy
Mahazo komisiona 5% ianao izao isaky ny manohana doka amin’ny dokambarotra ny namanao.
Mendrika hatokisana anao ny MarketBot.
Atombohy ny fidiram-bola maharitra ao anatin’ny 48 ora!
Fanamarihana fanomezana 50 USD rehefa misoratra anarana!
MAHAZO 50 USD AD BUDGET
Fepetra fampiasana Voucher / taratasy fanamarinana
Torolàlana Iza no Marketing hamorona rafitra 1 volana hahazoana 2000usd +
Torolàlana hanalana vola amin’ny Ai Marketing mankany amin’ny VNDC Wallet
Fiarovana 2-layer ho an’ny kaonty Ai Marketing sy Inb.network
Torolàlana hanonerana ny VNDC mankany amin’ny Ai Marketing ao anatin’ny 5 minitra
Fivarotana cashback an-tserasera maherin’ny 20.000
Manolotra ny vola azo indramina tsara indrindra eny an-tsena izahay.
Fahasamihafana eo amin’ny tahan’ny refund
KATEGORIANA FIVORIANA ONLINE
Ny fifanarahana tsara indrindra amin’ny fivarotana eo akaikin’ny trano
MANDROSO NY FANDRAISANA / FANDRAISANA
Famakafakana ny fironana MarketBot
Avelao ny MarketingBot hametraka paikady dokam-barotra ho anao ary mahazo vola amin’ireo manam-pahaizana momba ny fifamoivoizana!
MarketBot dia manara-maso ny fironana amin’ny media sosialy sy ny fangatahana fikarohana ary maminavina ny fangatahana amin’ny ho avy amin’ny alàlan’ny famakafakana ny dinamika lazan’ny teny lakile.
💥Ahoana ny fiasan’ny Ai-Marketing💥
Talohan’izay dia nanakarama orinasan-doka ireo orinasa ary tsy maintsy nandany vola tamin’ny fantsona fanaovana dokambarotra aloha, rehefa nividy ny mpanjifa, nivarotra sy nanangona ny orinasa ary noho izany, tsy fantatr’ilay orinasa raha afaka mivarotra izy na tsia, ary efa nanary vola lany tamin’ny fanaovana doka. .ary tsy mandeha intsony izao ny fanaovana an’izany.
Ka ankehitriny miova ny fotoana ary mampihatra ny teknolojia AI faharanitan-tsaina amin’ny varotra ny orinasa. Hivarotra vokatra amin’ny orinasa ilay robot ary hahazo fihenam-bidy mivantana avy amin’ireo vokatra amidin’ny robot.Mivarotra entana ny robot, avy eo ny orinasa dia mila mandany vola amin’ny fanaovana doka.
Araka izany, mandray soa ny antoko 5 rehetra:
Afaka mividy entana amin’ny vidiny lafo ny mpanjifa satria mandingana ny mpanelanelana amin’ny dokambarotra izy ireo.
Mivarotra vokatra ny orinasa. Aorian’ny fivarotana ny vokatra dia mila mandoa dokam-barotra ianao (Affiliate), raha tsy afaka mivarotra azy ianao dia tsy mila mandoa.
Ny olona manambola vola amin’ny orinasa AI Marketing dia hizara tombony rehefa mivarotra vokatra 55% amin’ny sandan’ny famerenam-bola ny robot (ny tombony dia manodidina ny 35% / volana / vola napetraka).
AI Marketing Company dia mahazo tombony ihany koa amin’ny baiko tsirairay mifanaraka amin’ny 45% amin’ny sandan’ny famerenam-bola. Amidio bebe kokoa, mankafy bebe kokoa, mivarotra kely, mankafy kely. Tsy misy tsindry amin’ny varotra.
Ireo masoivohon’ny dokambarotra, ireo tranokala mpivarotra dia manana mpiara-miasa lehibe toa ny AI Marketing izay mandany teti-bola amin’ny fanaovana dokambarotra lehibe isan’andro.
Noho izany, ny orinasa sy ny sehatry ny dokambarotra amin’ny varotra dia samy mahazo tombony, satria ny orinasa dia tsy maintsy mandoa fihenam-bidy fotsiny rehefa mivarotra entana izy ireo, ary ny dokam-barotra AI izay mivarotra be dia be dia hahazo%.
Izay no ara-drariny sy mahomby indrindra, ny volan’ny mpampiasa dia ny vola lanin’i AI amin’ny fanaovana doka fotsiny.
Mampiroborobo ny varotra amin’ny namana ary mahazo 5% amin’ny fividianany!
Afaka mahazo cashback ianao rehefa manasa namana na mijery entana.
Fiarovana amin’ny famerenam-bola amin’ny MarketBot
Kaody nofoanana + Tsy afaka aterina
Haingam-pandeha, mora ary maimaim-poana
JEREO NY PETA LALANA